Torohevitra 13 momba ny taolam-paty tokony hodinihin'ny mpanao endrika | Famoronana an-tserasera
Typography no andry manohana ny volavola rehetra. Sarony kely ny sarony tsara raha ny Typography ny boky no diso, raha tsy voakarakara ny habeny, raha tsy mazava ny ambaratongam-pahefana, raha reraka ny mpamaky rehefa mijery ireo pejy.
Si liana amin'ny typografia ianao manomboka eto dia mamporisika anao aho hamaky ny bokin'i Enric Jardí mitondra ny lohateny Torohevitra 22 momba ny typografia, mari-kaja eny an-tsaha. Raha ny marina, ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny fampahalalana izay aseho ao aminy amin'ny fomba didaktika sy fialamboly.
1 Torohevitra 13 momba ny typografia
1.1 Mampiasà endritsoratra 2
1.2 Mampita ihany koa ny typography
1.3 Ny endritsika tsy dia tsara tarehy amin'ny habe rehetra
1.4 Mitandrema amin'ny fiteny
1.5 Tsy mitovy amin'ny habe ny vatana
1.6 Alefaso amin'ny mpanonta ny fonanao
1.7 AZA manova karazana
1.8 Karakarao ny hierarchies
1.9 Mampiasà takelaka fototra (raha tianao)
1.10 Ahenao ny elanelam-potoana sy ny elanelana amin'ny lohateny
1.11 Araho maso ny lohatenin'ny lohateny sy ny lohateny
1.12 Tandremo ny orthotypography
1.13 Varavarankon'ny fizarazarana sy fanamarinana: raharaha fitsapana sy hadisoana
Torohevitra 13 momba ny typografia
Mampiasà endritsoratra 2
Ampy izy ireo, tsy mila 6 ianao (azo raisina amin'ny afisy ohatra, ohatra).
Mampita ihany koa ny typography
Tsy mitovy ny mampiasa Times New Roman (kanto nefa vetaveta) noho i Helvetica (manerantany ary tsy dia miraharaha loatra, angamba), na Courier Vaovao noho ny FF DIN. Miezaha hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny hafatra ampitainy ilay fampitam-baovao.
Ny endritsika tsy dia tsara tarehy amin'ny habe rehetra
Ny typeface tsirairay dia natao ho habe manokana. Raha ny fitsipika dia azontsika atao ny mahafantatra fa ny litera ho an'ny vatana madinidinika dia manana taolana lehibe kokoa ary tsy dia misy fahasamihafana eo amin'ny haavony eo amin'ny ambony sy ny ambany; ary koa, ny faritra manify indrindra dia matevina. Ohatra iray amin'izany ny Nimrod, izay ratsy tarehy amin'ny vatana lehibe ary mora vakiana amin'ny vatana kely.
Mitandrema amin'ny fiteny
Modely amin'ny boky iray ianao, misafidy endri-tsoratra izay manana accents, marika fanamarihana ary marika fiantsoana, ñ… Rehefa afaka 4 volana dia milaza aminao izy ireo fa tsy maintsy manao fanontana manokana ho an'ny firenena Arabo. Manana an'io lehilahy io ve ny endri-tsoratra ilainao? Ity dia zavatra iray tena lehibe tokony harahina amin'ity karazana asa ity, izay azo hitarina. Mba hialana amin'ny risika dia ampiasao ny mpivarotra tsara indrindra amin'ny typeface ary alao antoka fa, raha mila azy ireo ianao dia afaka mividy ny fonosana mifanaraka aminao.
Tsy mitovy amin'ny habe ny vatana
Adobe Garamond Regular 11-body ary Helvetica Neue an'ny vatana iray ihany, tsy mitovy habe izy ireo. Raha ny tena izy, raha samy mampiasa an'io lahatsoratra io amin'ny teny tokana isika dia ho hitantsika fa mila mitsambikina ny masontsika hamaky ny Helvetica Neue. Mba hampifanarahana ny habeny dia tsara kokoa ny "manitsy amin'ny maso" maka ny X amin'ny endritsoratra tsirairay ho referansa. Amin'ity tranga ity, avelantsika ny Adobe Garamond Regular mankany amin'ny melee 11 ary hampihena ny Helvetica Neue mankany amin'ny melee 8'4.
Alefaso amin'ny mpanonta ny fonanao
Tena mora izany ao amin'ny fanontana avelao hisolo ny hafa ny typografikanay. Mba hisorohana an'io, ny tsara indrindra (amin'ny tranga InDesign) dia ny safidin'ny Package (File> Package); ary raha tsy izany dia mamorona PDF ary alefaso ihany koa ny fisie ny endritsoratra ampiasana ampiasaina (raha mampiasa roa isika, dia roa). Mazava ho azy: jereo tsara ny fahazoan-dàlan'ny fonenanao, satria raha tsy mamela anao hanatitra azy ireo amin'ny mpanao gazety ianao, dia manao lalàna tsy ara-dalàna.
AZA manova karazana
Aza manefy azy, aza manitatra. Aza ahinjiro. Aza atao koa ny manao sora-mandry diso, na mandika diso, na satroka kely sandoka. Manimba ny asa aman-taonanao ianao miainga amin'ny matihanina nanolo-tena ho an'ny tenany ka hatramin'ny famolavolana sy famolavolana ny litera tsirairay efa-polo alina.
Karakarao ny hierarchies
Tsy maintsy asiana tombo-kase voajanahary ary takatry ny masontsika voalohany hoe inona ny lohanteny voalohany, ny faharoa, ny fahatelo ...
Mampiasà takelaka fototra (raha tianao)
Izany dia hanome anao fitambarana mahazatra kokoa, satria ny tsipika an-tsoratra dia hitovy halava.
Ahenao ny elanelam-potoana sy ny elanelana amin'ny lohateny
Raha mampiasa habe lehibe ianao, dia tsara raha atao maso izany.
Araho maso ny lohatenin'ny lohateny sy ny lohateny
Amboary ny fanarahan-dia sy ny famonoana kerning mba tsy hisy fahasamihafana amin'ny toerana fotsy.
Tandremo ny orthotypography
Inona ny teny nindramina hampiasaina? Ahoana ny fomba hanoratana teny nalaina? Vakiteny tsara (atoro anao mafy) hianarana izany rehetra izany dia ilay boky antsoina Orthotypography ho an'ny mpamorona, nataon'i Raquel Marín Álvarez (amin'ny € 19 ao amin'ny Gustavo Gili).
Varavarankon'ny fizarazarana sy fanamarinana: raharaha fitsapana sy hadisoana
Para sorohy ny kamboty sy ny mpitondratena, ity tontonana InDesign ity dia manan-danja indrindra. Amin'ny fanovana ireo soatoavina miseho ao aminy, dia afaka mahatratra ireo andian-tsoratra miforona tsara kokoa isika. Ny hafetsena? Tsia, ny zava-drehetra dia olana amin'ny maso tsara sy ny fizotran'ny fahadisoana. Mifalia!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Torohevitra 13 momba ny taolam-paty tokony hodinihin'ny mpamorona rehetra
Criswolf dia hoy izy:
Torohevitra tena tsara, ^ _ ^
Fanamarihana iray monja: ao amin'ny teboka faha-6 dia hiteny aho hoe "atolory ny mpanonta ny endritsika ... raha avelan'ny lisansa." Raha tsy izany dia tsy ara-dalàna. Ny ambiny dia torohevitra tsara.
Tsara ry Octavio, feno ny teboka faha-6 dieny izao;)
ADY SAINTS dia hoy izy:
Andriamanitra ô, »Times New Roman (kanto nefa vetaveta)» Efa tsy naniry intsony ny hamaky ny ambiny aho fa mamela ahy hieritreritra ...
Valio amin'i SANTOS GUERRA
Manantena aho fa tsy nanelingelina anao ny hevitra tao amin'ny Times New Roman. Raha ny marina dia nizara ny hevitra nitovizan'i Enric Jardí ao amin'ny boky 22 Tip Tipografia (iorenan'ity lahatsoratra ity) aho. Mazava ho azy fa hevitra manokana sy manokana mety tsy ekenao izany.
Ny zava-mitranga amin'ny Times New Roman dia ny hoe, raha mbola nampiasaina dia "very ny glamor". Mitranga izany amin'ny zavatra rehetra ankamamiana sy ankasitrahana indrindra, ka ampiasaina amin'ny fomba fitetezana na aiza na aiza, mitovy amin'ny nitranga tamin'i Helvetica ... Fa efa nolazaiko kosa fa hevitr'izy ireo tanteraka.
Manentana anao aho hanohy hamaky ity lahatsoratra ity, satria afaka miombon-kevitra amin'ny hevitra hafa ianao :)